@DigiAfricanLang : mitondra ny ‘Fon’ ho ety anaty Aterineto i Mahuton Bienvenu Possoupe, ny 3 hatramin’ny 9 jolay 2019 · Global Voices teny Malagasy
@DigiAfricanLang : mitondra ny ‘Fon’ ho ety anaty Aterineto i Mahuton Bienvenu Possoupe, ny 3 hatramin'ny 9 jolay 2019
Nandika (fr) i Gwenaëlle Lefeuvre
Voadika ny 12 Septambra 2019 11:45 GMT
Vakio amin'ny teny Esperanto , Français, English
.Sary natolotr'i Mahuton Bienvenu Possoupe.
Ny taona 2019, ho fandraisana anjara amin'ny fanentanana an-tambajotra sosialy mba hankalazana ny hamaroam-pitey ety anaty aterineto, hifandimby hitantana ny kaonty Twitter-n'ny @DigiAfricanLang ireo Afrikàna mpikatroka sy mpiaro ny teny mba hizarana ireo traikefany tamin'ny resaka fanomezana aina vao sy fampiroboroboana ireo teny Afrikàna. Mikasika an'i Mahuton Bienvenu Possoupe (@b_mahuton) sy izay kasainy horesahana mandritra ny herinandro amin'ny maha-mpampiantrano azy ity lahatsoratrana fampahafantarana ity.
Rising Voices (RV) :Mba lazalazao aminay ny momba anao?
Mahuton Bienvenu Possoupe no anarako. Ny Mahuton dia midika hoe “olon'Andriamanitra” amin'ny ‘fon’ [teny frantsay]. Ny ‘fon’ no tenim-pirenena be mpiteny indrindra ao Bénin [teny frantsay].
Avy any amin'ny lemak'i Ouémé ny ray amandreniko ary miteny ny wémé, fiteny iray izay azoko tsara saingy tsy dia haiko miteny loatra. Saingy, koa satria aho teraka ary lehibe tao amin'ireo vondrom-piarahamonina mpiteny ny teny Fon, noho izany dia miteny an'io aho ary mahazo azy, sahala amin'ny ankamaroan'ireo Fons rehetra.
Mpamorona rindrambaiko informatika aho ary manampahaizana manokana mikasika ny varotra anaty tambajotra. Fanampin'izay, Mpamorona rindrambaiko miasa maimaimpoana aho ho an'ny Mediawiki nanomboka ny taona 2018. Ny Mediawiki no rindrambaiko ao ambadik'ireo tetikasa wiki toy ny Wikipedia. Nanomboka ny taona 2014 nandray anjara tamin'ny Wikipedia aho tamin'ny alalan'ny fandraketana antontan-kevitra momba ny fireneko, ny kolontsainy sy ny vahoakany. Izaho no iray amin'ireo mpikambana mpamorona ny Vondron'ireo mpampiasa ny Wikimedia ao Bénin ary manampy an'ireo Beninoà mpandray anjara vaovao aho amin'ny fanombohan'izy ireo maimaimpoana. Tamin'ny taona 2018, nandritra ny hackaton an'ny Wikimedia tao Barcelone, natomboko ny Wikipedia amin'ny teny fon niaraka tamin'ny fanohanan'ireo olona tao amin'ny Fondation Wikimedia. Eo andalam-pananganana ny vondrom-piarahamonina iray an'ireo mpandray anjara maimaimpoana miteny fon ao Bénin aho izao.
Tokotokony ho teo amin'ny faha enina ambinifolo taona teo aho, dia afaka namaky an'ireo lesona sy nanoratra an'ireo vavaka tamin'ny teny fon tao am-piangonana rehefa andro alahady. Tsaroako fa niteny tamiko ireo olona taorian'ny lamesa hoe: “Tsara, hainao tsara ny namaky teny”. Namporisika ahy io teny io hanatsara hatrany ny soratro sy ny vakiteniko amin'ny teny fon.
Ankehitriny, ilay olona izay izaho ankehitriny, dia maniry mba hirehareha amin'ny fiteniny ny vahoakany. Iriako ireo olona mba haka an'ireo fotoana rehetra ary hirotsaka amin'ireo hetsika santatra rehetra mba hanandratana azy. Inoako fa ny fiteny no anisan'ny mpitatitra iray mitondra firoboroboana.
RV : Manao ahoana ny toeran'ny teninao ankehitriny ao amin'ny Aterineto sy ivelan'ny tambajotra?
Maherin'ny dimy amby roapolo ny tenim-pirenena ao Bénin. Amin'ireo rehetra ireo, ny fon no tena iresahana betsaka indrindra. Iresahana ihany koa izy any amin'ireo faritra sasantsasany ao Nizeria sy Togo. Manodidina ny efatra tapitrisa ankehitriny ireo olona miteny fon, saingy tsy mbola tena hita tanteraka ao anaty Aterineto ny teniko. Ny tena antony dia satria afaka miresaka amin'ny teny fon ireo olona, nefa vitsy amin'izy ireo no mamaky na manoratra azy io, ary ireo izay mba afaka kosa amin'ny ankapobeny dia tsy manana fidirana teknolojia amin'ny aterineto, ka tsy afaka ny mampiroborobo azy amin'ny aterineto.
Mahamenatra ny sasantsasany ny miresaka amin'ny fiteny fon, na ny tenindreniny amin'ny ankapobeny mihitsy, satria heverin'izy ireo fa ho toy ny tsy mahay taratasy izy ireo amin'izany. Any amin'ny sekoly ambaratonga voalohany, mety ho voasazy ianao raha toa ren'ny mpampianatra miteny ny fiteny fon ..
Ireto manaraka ireto ny fanamby roa tena goavana indrindra:
1-Mamorona fandraisana andraikitra mba hampianarana an'ireo mpandahateny amin'ny teny fon ny fomba fanoratra sy famaky azy, ary io dia azo atomboka any amin'ny sekoly ambaratonga voalohany. Mianatra mamaky sy manoratra ny teny frantsay na ny teny anglisy ireo mpianatra tanora any amin'ireo sekoly ao Benin, noho izany azo atao ihany koa izany amin'ny teny fon.
2-Ilainay ny mamorona vahaolana ara-teknolojika izay manampy ireo olona hanoratra mora foana eo amin'ireo solosaina na amin'ireo fitaovana entin-tanana. Saingy andalam-piforonana ireo fandraisana andraikitra ireo, ary angamba mety mila fotoana ela mba tena hiadiana amin'ireo fanaùby ireo, nefa mitohy ny finoako hoe ho azo atao izany.
RV : Lohahevitra inona no tianao hifantohana mandritra ny herinandro hitantananao ny kaonty Twitter-n'ny @DigiAfricanLang ?
Miainga avy amin'ireo fanamby izay nolazaiko tery ambony, hifantoka tanteraka aminà lohahevitra telo goavana aho:
1-Fanentanana ny olona amin'ny maha-zavadehibe ho anay, amin'ny maha Beninoà, ny fampiroboroboana ny tenim-pirenenay ary indrindra fa ny fon, amin'ny alalan'ny fampiasana azy eo amin'ny fifaindraisana andavanandro.
2-Fandraisana andraikitra izay mampiroborobo ny fiteny Fon ety anatiny sy ivelan'ny Aterineto
3-Ireo teknolojia izay afaka hanampy an'ireo Beninoà hamaky, hanoratra ary hiteny ny teny fon.
RV : Inona no tena mandrisika anao hanao fikatrohana nomerika ho an'ny teninareo? Ny fanantenana sy ny nofinofinao ho amin'ny fiteninareo?
Ny antony manosika ahy voalohany indrindra dia ny hanome lanja bebe kokoa ny fiteny fon ety amin'ny Aterineto, miaraka aminà vontoaty betsaka amin'ny fiteny fon. Manantena aho fa indray andro any, ireo mpanapa-kevitra eto amin'ny fireneko dia hanao ihany koa hetsika izay hanome lanjany ny fiteny fon amin'ny:
fandraketana ny fahalalanay manokana atao amin'ny fiteny izay naha zatra anay
famadihana an'io fahalalana io ho lasa ilaina, eo amin'ireo sahan'ny siansa rehetra sy ireo kanto, ho azon'ireo rehetra tsy miteny afatsy ny teny fon hidirana.